फोटोशपको साथ फोटोको दाँत कसरी हलु गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
कसरी एक फोटो मा दाँत लाईइट गर्न को लागी Photoshop यो प्रोग्रामको साथ गर्न केहि धेरै सजिलो छ व्यावसायिक फोटो retouching, हामी यो कुरा सुनिश्चित गर्नेछौं कि हामीले फोटो खिचेको सबै मुस्कानहरू केही डी छन्मोती जस्तो चम्किला दाँत। के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभयो कि किन म्यागजिनहरूमा भएका सबै हाँसोहरूमा त्यस्तो सफा, सेतो दाँत छ? उत्तर छ Photoshop.
केहि मिनेटमा तपाईं पाउनुहुनेछ पेशेवर डिजिटल retouching प्रविधिको प्रयोग गरेर मुस्कानहरू उज्यालो बनाउनुहोस् त्यसले हाम्रो फोटोग्राफिक परियोजनाहरूको राम्रो परिणाम ल्याउनेछ। यो रिचिंग टेक्निकले हामीलाई हाम्रा आवश्यकता अनुसार सबै प्रकारका उद्देश्यहरूको लागि सेवा दिन सक्छ, तपाईंले दाँत हलुका गर्न मात्र होइन तर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। सटीक चयन सिर्जना गर्नुहोस् र केहि संग काम उपकरणहरू कसरी गर्ने प्रोफेसर.
राम्रो मुस्कान पाउनुहोस् यो को मद्दत को लागी धेरै सजिलो धन्यवाद छ Photoshop र को दुनिया मा यसको असीम संभावनाहरु फोटो रिचचिंग। केही उपकरणहरू प्रयोग गरेर हामी मुस्कानको दाँत हलुका गर्न सक्षम हुन्छौं जुन हामीले फोटोग्राफ गरेका छौं उही समयमा हामी मालिक छौं। व्यावसायिक काम प्रविधिको।
हामीले यो रिचच गर्न आवश्यक पर्ने पहिलो कुरा भनेको फोटो हो जहाँ तपाईं मुस्कान देख्न सक्नुहुन्छ। एक पटक हामीसँग फोटो छ, अर्को कुरा हामी गर्न गइरहेका छौं दाँतको चयन सिर्जना गर्नुहोस्, यसको लागि हामी कुनै पनि प्रकारको चयन उपकरण प्रयोग गर्न सक्दछौं Photoshop। हामी यो प्रयोग गर्न सक्छौं चुम्बकीय लुप उपकरण यस प्रकारको कामको लागि पर्याप्त सटीक चयन गर्नुहोस् वाaप्रयोग गर्नुहोस् द्रुत मास्क
छनौट गरेपछि, हामीले गर्नुपर्ने अर्को कुरा हो एक स्तर समायोजन तह सिर्जना गर्नुहोस्, यो विकल्पले हामीलाई अनुमति दिनेछ चित्रमा दाँत हलुका गर्नुहोस्। हामी पाठ्यक्रमहरू हाम्रो आवश्यकता अनुसार सार्छौं र हामीले खोजेको नतीजा अनुसार परिवर्तन लागू गर्दछौं।
रिचच समाप्त गरेपछि हामीले गर्नुपर्ने अन्तिम कुरा यसलाई सहज पार्नु हो दाँजोको किनार र छविको बाँकी भाग बीचको परिवर्तन यति ध्यान दिँदैन कि त्यसो भएन। नरम गर्न को लागी हामीले के गर्नु पर्छ धमिलो लागु गर्नुहोस् स्तर समायोजन तहमा।
सहयोगको लागि धन्यबाद Photoshop हामी सक्छौ फेशन पत्रिकाहरूको शैलीमा हाँसो प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईंसँग अब कुनै बहाना छैन, तपाईको क्यामेरासँग अमर बनाउनुहुने सबै अर्को स्माइलहरूमा हिउँ जस्तो मुस्कान हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Photoshop » फोटोशपको साथ फोटोको दाँत कसरी हलु गर्ने